'कबिर सिंह' को सक्सेस पार्टीमा किन आइनन् मिरा ?
‘कबिर सिंह’ को सक्सेस पार्टीमा किन आइनन् मिरा ?
प्रकाशित : शुक्रबार, असार २०, २०७६१७:५९
फिल्म । पछिल्लो केहि समययता फ्यामिली ड्रामा फिल्म गरिरहेका अभिनेता शाहिद कपूर एक्सन अवतारमा प्रस्तुत भएका छन् । गत जुन २१ बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘कबिर सिंह’मा शाहिद मात्र छन् । केहिले यसलाई ‘द शाहिद कपूर शो’ पनि भनेका छन् । पछिल्लो फिल्म‘आर राजकुमार’ मा एक्सन ब्वाईको रुपमा प्रस्तुत भएका शाहिदले यस फिल्म मार्फत सबैको मन जितेका छन् ।
फिल्ममा शाहिदले गरेको अभिनयको तारिफ नगर्ने सायदै होलान् । सन्की र साहसी सर्जनको भूमिका निर्वाह गरेका शाहिदले आफुलाई हरेक सिनमा उस्तै प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को रिमेक हो भने यसलाई पनि सन्दीप वांगा रेड्डीले नै निर्देशन गरेका छन् । फिल्म दुइ सय करोड क्लबमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । फिल्मले युवापुस्ताको कथा बोलेको कारण पनि यसले सफलताको रेकर्ड बनाईरहेको छ । फिल्ममा कियारा एड्वानी उनको अपोजिटमा छिन् ।
फिल्म ‘ब्लकबष्टर’ भएपछी ‘कबिर सिंह’ टिमले सक्सेस पार्टीको आयोजना गरेको थियो । जहाँ फिल्मसंग जोडिएका कास्ट एण्ड क्रु फ्यामिली सहित उपस्थित थिए । तर , फिल्मका टाइटल क्यारेक्टर शाहिद भने एक्लै थिए । उनिसंग श्रीमती मिरा कपूर थिइनन् । पार्टीको सार्वजनिक तस्वीरमा मिरा नदेखिएपछि गसिप पनि बन्यो तर यतिबेला यो साम्य भईसकेको छ । किनकी मिराले आफु साथिको बिहेमा रहेको प्रमाण सोसल मिडियामा पेश गरेकी छिन् ।
यसकारण किस गर्दैनन् सलमान
सिल्वेस्टर ‘रेम्बो’ अवतारमा आउँदै